Izy io dia nalaina avy tamin'ny mikraoba Soy (Glycine max.) Anana isan-taona an'ny genumin leguminosae, miaraka amin'ny mavo marivo ka hatramin'ny vovoka fotsy, fofona manokana ary tsiro maivana. Ny akora mavitrika dia isoflavones soja, ny sozy isoflavones dia karazana flavonoid, izay karazana metabolite faharoa izay niforona tamin'ny fitomboan'ny soja. Ny soof isavlavones dia antsoina koa hoe phytoestrogens satria nalaina avy tamin'ny zavamaniry ary manana firafitra mitovy amin'ny estrogen. Ny sooflavones dia agents chemopreventive voajanahary ho an'ny homamiadana, izay misy fiantraikany amin'ny tsiambaratelon'ny hormonina, ny biolojika metabolika, ny synthesie proteinina ary ny hetsiky ny fitomboana.
Izy io dia nalaina avy amin'ny faka maina an'ny polygonum cuspidatum sieb.et.zucc, miaraka amin'ny mavo volontsôkôlà hatramin'ny vovoka fotsy, fofona manokana ary tsiro maivana. Ny akora mavitrika dia resveratrol, karazana fitambarana organika tsy flavonoid polyphenol izy io, izay antitoxin novokarin'ny zavamaniry maro rehefa entanina. Resveratrol voajanahary dia manana rafitra CIS sy trans. Amin'ny natiora, dia misy indrindra amin'ny fifanarahana trans. Ireo rafitra roa dia afaka mitambatra amin'ny glucose hanjary CIS sy glycosides trans resveratrol. CIS sy trans resveratrol glycosides dia afaka mamoaka resveratrol eo ambanin'ny asan'ny glucosidase ao amin'ny tsinay. Trans resveratrol dia azo avadika ho isomerika CIS eo ambanin'ny fantsom-panafody UV.
Izy io dia nalaina avy tamin'ny hodi-kazo maina an'ny phellodendron amurense, miaraka amin'ny vovoka mavo, fofona manokana ary tsiro mangidy, akora mavitrika dia berberine hydrochloride, alkaloid amonium quaternary izay tafasaraka amin'ny Rhizoma Coptidis ary izy no singa mavitrika Rhizoma Coptidis. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny disenteran'ny bacillary, gastroenteritis maranitra, cholecystitis mitaiza, conjunctivitis, media otitis supurative ary aretina hafa, misy vokany lehibe eo amin'ny fitsaboana. Berberine hydrochloride dia alkaloid isoquinoline, izay misy amin'ny zavamaniry maro misy fianakaviana 4 sy 10 genera
Izy io dia nalaina avy tao amin'ny Andrographis paniculata (Burm.f.) Ness, miaraka amin'ny mavo volontsôkôla hatramin'ny vovoka fotsy fotsy, fofona manokana ary tsiro mangidy. Ny akora ampiasaina dia andrographolide, Andrographolide dia singa biolojika, ny singa mahomby indrindra amin'ny zavamaniry Andrographis paniculata. Izy io dia misy ny vokatry ny fanesorana ny hafanana, ny fihenan-tsakafo, ny anti-inflammatoire ary ny analgesic. Izy io dia misy fiatraikany miavaka amin'ny tsimokaretina sy ny otrikaina amin'ny otrikaretina ambony sy ny otrikaretina. Fantatra amin'ny hoe fanafody antibiotika voajanahary.
Izy io dia nalaina avy amin'ny hodi-kazo an'ny Cinnamomum cassia Presl, miaraka amin'ny vovoka mena mena, fofona manokana, tsiro manitra sy mamy, akora masiaka dia polyphenols Cinnamon, polyphenol zavamaniry ny cinnamon polyphenol, izay afaka mampiroborobo ny syntesisan'ny collagen ao amin'ny vatan'olombelona aorian'ny maha-izy azy tototry ny vatan'olombelona, ​​ary afaka manala ny radika maimaim-poana amin'ny vatana. Izy io dia afaka manafaingana ny fitomboan'ny sela hoditra, mampitombo ny asan'ny sela hoditra ary mampihemotra ny fahanteran'ny hoditra.
Izy io dia nalaina avy amin'ny faka maina an'ny Eurycoma longifolia Jack, vovoka mavo Brown, fofona manitra manokana sy mangidy, akora mavitrika dia eurycomanone, ny eurycomanone dia misy ny fijanonan'ny tazomoka, ny fanesorana ny fahamandoana ary ny jaundice, ny fanamafisana ny Yang, ny fanatsarana ny tanjaka ara-batana sy ny tanjaka, ny fihenan'ny havizanana, sterilization, anti-fery ary antipyretic. Izy io koa dia misy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny aretina isan-karazany toy ny fiakaran'ny tosidrà sy ny diabeta.
Izy io dia nalaina avy amin'ny tsiry maina an'ny Sophora japonica (Sophora japonica L.), zavamaniry leguminous. Ireo singa simika dia rutin, quercetin, genistein, genistin, kaemonol ary ny sisa miaraka amin'ny vovoka mavo mavo mavo. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny mpitsabo ao an-trano sy any ivelany dia nandinika ny vokany, ary nahita fa ny akora mihetsika ao aminy dia misy hetsika fanoherana ny bakteria, antiviral, anti-inflammatoire ary anti-oxidation, ary misy fisorohana sy fanasitranana tsara amin'ny fihenan'ny lipidan'ny ra, fanalefahana ny ra sambo, voa miady amin'ny inflammatoire ary tonifying.
Ny fitrandrahana epimedium dia nalaina tamin'ny zavamaniry Berberidaceae, izay nalaina avy tamin'ny ravina maina an'ny Epimedium (latina: Epimedium Brevicornum Maxim). Vovoka mavo volontsôkôla misy fofona manokana ary misy lanjany lehibe amin'ny fanafody. Ny fitrandrahana epimedium dia misy Icariin ary nampiasaina ho aphrodisiac voajanahary voajanahary efa hatramin'ny ela. Icariin dia manana hetsika ara-batana marobe ary maro ny vokatra sy fampiharana ara-panafody vaovao hita. Izy io dia tsy vitan'ny fampitomboana ny rà mandriaka amin'ny lalan-drà ho an'ny fo sy ny serebrovaskular, mampiroborobo ny fiasan'ny hematopoietika, fa koa misy ny vokatry ny fanamafisana ny voa sy ny tsy fahampian, anti- fivontosana sns. Izy io dia mety levona anaty rano, etanol ary etil acétate, fa tsy azo ovaina amin'ny ether, benzene ary chloroform.
Oleuropein dia avy amin'ny ravina oliva (Olea Europaea L.). Ny angano dia nilaza fa i Athena, andriamanibavin'ny fahendrena dia nandresy an'i Poseidon tamin'ny fanipazana ny lefony tamin'ny vatolampy, namorona hazo oliva mamoa. Ny hazo oliva dia tandindon'ny fiadanam-po, fisakaizana, fahavokarana ary fahazavana, fantatra amin'ny anarana hoe "hazon'aina". Misy fitambarana phenolika dimy lehibe amin'ny ravina oliva: oleuropein, flavonoids, flavones, flavanols ary soline phenolic. Oleuropein, ny biôgrafia indrindra amin'ireo fitambarana ireo, no singa lehibe indrindra amin'ny secoiridoid polyphenolic amin'ny ravina oliva. Vovoka mavo volontany io ary be mpampiasa amin'ny vokatra ara-pahasalamana sy kosmetika.
Fakan-tahaka ny volo
Izy io dia nalaina avy amin'ny voa maina an'ny ahitra flax (Linum usitatissimum L.) an'ny fianakavian'i Linaceae. Ny akora ilaina dia Secoisolariciresinol Diglucoside (SDG) misy vovoka mavo volontsôkôlà. Ny SDG dia heverina ho toy ny phytoestrogens, izay tena mitovy amin'ny estrogens an'ny olombelona. Izy io dia hita indrindra amin'ny voan'ny rongony, ary ny atiny dia miankina amin'ny karazana rongony, ny toetrandro ary ny toe-java-misy eo amin'ny tontolo iainana. Misy vokany misoroka amin'ny aretina miankina amin'ny estrogen toy ny homamiadan'ny nono, homamiadan'ny prostaty, soritr'aretin'ny fadimbolana ary osteoporose. Ny SDG nalaina voajanahary dia tsy azo ampiasaina ho toy ny additives amin'ny sakafo miasa, fa azo ampiana amin'ny kosmetika koa hisorohana sy hitsaboana ny fahanton'ny hoditra amin'ny fananana antioksidanany.
Ny Baicalin dia vongana mitoka-monina nalaina indrindra tamin'ny faka-karandohany (Scutellaria baicalensis Georgi (Lamiaceae)). Ny vovoka baicalin dia maitso mavo misy fofona kely sy tsiro mangidy. Izy io dia manana hetsika biolojika manan-danja, bakteria, diuretic, anti-inflammatoire ary vokatra hafa, ary manana valiny fanoherana ny homamiadana mahery amin'ny fahombiazan'ny fisiolojika. Izy io koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Ny fitanana ultraviolet an'ny baicalin dia afaka manala ireo radika tsy misy oxygen ary manakana ny fananganana melanin. Noho izany, tsy azo ampiasaina amin'ny fanafody ihany izy io, fa amin'ny kosmetika ihany koa, izay akora kosmetika miasa tsara.